Dhaqdhaqaaqa dowladaha aan dhinac u janajeerin ee loo soo gaabiyo NAM oo taageeray xubinnimada filistiin ee QM
Cairo:-Wasiirka arrimaha dibadda Masar Maxed Kaamil Cumar ayaa sheegay in dhaqdhaqaaaqa dowladaha aan dhinac u janajeerin ay kulankoodii ugu dambeeyey ee kadhacay magaalo madaxda dalka Serbia Belgrade ay ku taageereen dadaalka xukuumadda filistiin ay kujirto sidii ay xubin uga noqon lahayd QM.
Mr Cumar oo shir jaraa’id ku qabtayBelgradeayaa sheegay in ay sii wadayaan taageerada dadaalka ay ugu jiraan sidii ay filistiin xubin oga noqon lahayd Jamciyada Qorumaha ka dhaxaysa iyo dowlad caasimadeedu tahay Qudus.
Mas’uulka masaarida oo shir gudoominayey fadhigii 66aad ee golaha ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa dowladaha aan dhinac u janajeerin ay si rasmi ah u aqoonsan yihiin dowlad filistiin leedahay.
Dhanka kale madaxweynaha Filistiin Maxamuud Cabaas ayaa la filayaa in uu u gudbiyo QM 20 bishan September dalab rasmi ah oo ku aadan kamid ahaanshaha xubnaha QM inkastoo ayIsraeliyo mareykanka ay ka soo horjeedaan.
Kulankii ugu dambeeyey ee dhaqdhaqaaqa dowladaha aan dhinac ujanjeerin ayaa lagu qabtay caasimaddaSerbiaeeBelgradesi loo xuso 50 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaskii dhaqdhaqaaqa sanaddii 1961.
Hogaamiyaashii aasaasay dhaqdhaqaaqa ayaa waxa ay kala ahaayeen madaxweynihii Yuguslaafiya Jooseef Buruus Tiitoo, madaxweynihii dalka Masar Jamaal C/naasir, Madaxweynihii Indonesia Axmed Sokarno iyo madaxweynihii Ghana Kuwaame Nakruuma.
Waxaa xusid mudan in dowladda mareykanka ay tahay dowladda bixisa dhaqaalaha ugu badan ee QM hesho iyadoo bixisa miisaaniyad dhan 22% howlaha ugu waa weyn ee QM iyo 25% howlaha nabad ilaalinta.
Dowladda Qadar oo kordhisay mushaaraadka muwaadiniinteeda
Dowxa:-Dowladda Qadar ayaa shaaca ka qaaday kordhinta mushaaraadka aasaasiga iyo gunooyinka bulshada shaqaalaha iyo howlgabka Qadariyaanka oo kamid yihiin ciidanka iyo dadka rayidka.
Talaabadan ayaa timid kadib wareegto uu soo saaray kuxigeenka dhaxal sugaha dalka Qadar Amiirka lagu magacaabo Sheekh Tamiim Bin Xamad Aala Thani taasi oo kabilaabanaysa bishan September 2011.
Qaraarkan ayaa dhigaya in la kordhiyo mushaaraadka shaqaalaha rayidka ee dowladda 60% halka mushaarka ciidanka la kordhiyey 50% balse saraakiisha loo kordhiyey 120%.
Sidoo kale waxaa la kordhiyey howlgabka rayidka 60% iyadoo sidoo kalana saraakiisha howlgabka ah loo kordhiyey 120%.
Dhaqaalaha ku bixi doono mushaar kordhinta ee uu amray Amiirka ayaa gaaraysa 10 bilyan oo Riyaalka Qadar ah oo u dhiganta 2.74 bilyan oo dollar.
Shirkadda Yahoo oo shaqada ka eriday agaasimaheeda fulinta
London:-Shirkadda adeegyada internet-ka ee Yahoo ayaa shaqadii ka eriday agaasimaheeda fulinta haweenayda lagu magacaabo Karol Barter.
Shirkadda ayaa intaas ku dartay in loo sharxay mas’uulka maaliyada ee shirkadda Tim Moris madaxa fulinta shirkadda si kumeel gaar ah.
Barter oo fariin dhanka emailka soo dirtay ayaa sheegtay in ay ka xun tahay in ay iska casisho xilkii ay haysay balse ay hadda u rajeenayso shirkadda iyo shaqaalaheeda wanaag iyo in ay sii wataan howlahooda.
Dhanka kale madaxa shirkadda Yahoo Roy Postook ayaa sheegay in uu u mahad celiyo Karol howshii ay u qabatay shirkadda xilli kala guur ah.
Warbixin ayaa sheegaysa in Barter oo la shaqeenysay shirkadda muddo labo sano iyo bar ay dadaal u gashay kobinta faa’iidada dhanka internet-ka balse ay ku guul dareysatay in ay hagaajiso sicirka saamiga yahoo ee suuqa xilligaas.
Jagooyinka ay ka shaqeysay kahor inta aysan la shaqeyn shirkadda Yahoo ayaa waxa ay xubin ka ahayd golihii seyniska iyo teknoloojiyada ee uu aasaasay madaxweynihii hore ee dalka mareykanka Gorge W Bush.
Xukuumadda Syria oo dib u dhigtay booqasho xoghayaha guud ee Jaamacadda carabta ku tagi lahaa Dimishiq
Cairo:- Xoghayaha guud ee jaamacadda Carabta Nabiil Al-carabi ayaa sheegay in uu dib u dhigay booqashadii la filayey in uu maanta ku tago dalkaSyria kadib dalab uga yimid xukuumaddaSyria.
Dhanka kale safiirka mareykanka dalkaSyriaRobert Ford ayaa cambaareeyey xukuumadda madaxweyne Bashaar Al-asad ololaheeda kadhanka ah dadka ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Asad.
Safiirka ayaa intaas ku daray in xukuumaddaSyriaay mas’uul ka tahay dhimashada labo kun iyo labo boqol oo qof oo lagu dilay dibad baxyada lagu diidan yahay maamulka Bashaar Al-asad, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay QM.
Wakaaladda wararka bariga dhexe ayaa mar sii horeysay sheegtay in xoghayaha guud ee jaamacadda carabta uu booqan doonoSyriamaalinta arbacada islamarkaana tafaasiisha ku aadan muddada iyo ujeedada booqashada la shaacin doono manta gelinka dambe.
Kulankii jaamacadda carabta ee heer wasiir arrimo dibadeed ee qabsoomay 28 august ayaa waxa loo xilsaaray xoghayaha guud ee jaamacadda carabta in uu gaarsiiyo hogaanka Syria in ay shacabka ka joojiyaan xadgudubyada ay kula kacayaan dadka ka soo horjeeda maamulka Madaweyne Asad.
Al-carabi ayaa tilmaamay in xukuumaddaSyriaay aqbashay dalab uga yimid jaamacadda carabta oo ku aadan booqasho jaamacadda carabta ku tagto dalkaSyria.
Dowladda Niger oo loogu baaqay in ay soo wareejiso gacan yarayaasha Qadaafi
Washington:-Dowladda mareykanka ayaa ku boorisay xukuumadda Niger in ay soo gacan geliso mas’uuliyiin sar sare oo katirsan maamulka Qadaafi kuwaasi oo warbaahintu sheegtay in ay ku sugan yihiin dhulka Niger kadib markii ay kolonyo gawaari gaashaaman ay ka gudubtay xadka Niger.
Afhayeenka maamulka madaxweyne Qadaafi ayaa sheegay in colonel Qadaafi uu caafimaad qabo, Islamarkaana uu qorsheenayo sidii uu uga difaaci lahaa dalka waxa uu ku sheegay in ay yihiin Shayaadhiin.
Wakaalada wararka Reuters oo soo xiganaysa ilo milatari oo faransiis iyo ciidamada Niger ayaa sheegtay in kolonyo gawaari oo ka kooban 50 ilamaa 100 gawaarida gaashaaman ay wehlinayaan guutooyin ciidanka Niger ah la filayo in ay la socdaan mas’uuliyiin iyo hogaamiyaal xoogaga Qadaafi ay hadda ku sugan yihiin koonfurta dalka Niger.
Wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa weriyey ku sugan deegaanka Agaadiis ayaa sheegtay in kolonyadu ay ku sii jeedo Magaalo madaxda dalkaNigeree Niyaami.
Wakaaladda ayaa sidoo kale tibaaxday in Mucammar Al-qadaafi iyo wiilkiisa Seyful Islaam laga yaabo in ay ku biiraan kolonyada oo ku sii waajahan marka ugu dambeysa dalkaBurkina Fasooo ah dowladda u soo bandhigtay Qadaafi iyo Qoyskiisa in ay ku noolaadaan dalkeeda.
Mar sii horeesay madaxii laamaha amaanka xukuumaddii Qadaafi oo ay wehliyaan xubno kale ayaa ka gudbay xadka u dhexeeyaLibyaiyoNiger.